Minneriya, iyo yakanakisa safari muSri Lanka | Kufamba Nhau
Minneriya, yakanakisa safari muSri Lanka
Enric Gili | | Colombo, General, Kufarira, Shiri Ranga
Nhasi ndiri kuzokuudza nezveimwe yenzendo dzakakosha kana iwe ukaenda kuSri Lanka, safari iri muMinneriya National Park.
Minneriya ndeimwe yemapaki makuru emunyika muSri Lanka. Iri munzvimbo yekuchamhembe-pakati yenyika uye ine nzvimbo ingangoita 9000 mahekita.
Yakagamuchira kuchengetedzwa kwepamutemo sepaki muna 1997 zvichipa kuvapo kukuru kwemhuka dzesango munzvimbo dzayo uye kuchengetedza madziva anopa zvinomera nemhuka zvemudunhu iri.
Inzvimbo yakakosha yakachengetedzwa uye inokwikwidza kufarirwa neYala, Bundala neUdawalawe, inozivikanwa kwazvo muCeylon. Mumwe nemumwe wavo anomira kunze kune chakatarwa chikonzero, Minneriya pasina kukahadzika nekuda kwenzou. Wese munhu anofamba kuenda kuSri Lanka anofanirwa kuenda kune 1 kana 2 mapaki emunyika.
Nguva yakanakisa yekushanya iri kubva munaChikunguru kusvika Gumiguru, mwaka wakaoma kuchamhembe kwenyika. Munguva yezhizha, mvura iri kushomeka uye mhuka dzinomanikidzwa kutamira kunzvimbo dzepaki nemadhamu.
1 Ungasvika sei kuMineriya?
2 Chii chekuona muMineriya? Fauna
3 Chii chekuona muMineriya? Flora
Ungasvika sei kuMineriya?
Minneriya iri padyo padyo neyakajairika tsika katatu kona weSri Lanka, iyo 3 inonyanya kukosha nzvimbo dzekuchera matongo munyika uye zvirokwazvo nzvimbo inoshanya kwazvo muCeylon (Sigiriya, Anuradhapura nePolonnaruwa). Neichi chikonzero chiri nyore kusvika kune ino National Park. Kazhinji, vafambi vanoita tsika yetriangle vanosarudzawo kuenda ku safari muMinneriya.
Kuti usvike pairi uye ugadzire safari kana kupinda mukati, iwe unofanirwa kukwereta sevhisi yakazvimiririra ine 4 × 4 mota uye mutyairi, haugone kuenda wega (sa2015) Iwe unogona chete kutenderera mukati medzimba dzakachengetedzwa ne4 × 4 mota. Mutengo haufanire kukwira pamusoro pe $ 45 kana $ 50 pamunhu. Kazhinji nguva yekushanya ingangoita maawa matatu kana mana, zvakakwana kuti zvinyatsoongorora musango nemapani nemadhamu.
Zviri nyore kwazvo kubata basa iri kana tangove munyika, haufanire kuribhadhara kubva pano. Iyo lodge kana hotera pachayo ichagadzirisa mafambiro acho. Imwe sarudzo ndeyekuenda kumataundi ari padyo nemusuwo wepaki ndokuhaya iyo agency uko, parutivi uye parutivi pemugwagwa izere nemakambani ayo emutengo unogara wakafanana unopa kuita rwendo.
Chinhu chine musoro zvakanyanya kunge chiri chekupinda mupaki ichibva kuSigiriya yakapihwa padyo (chete 10Km), ini ndinokurudzira kuti ushanyire nzvimbo yekuchera matongo nenzvimbo yepasirese yeSigiriya mangwanani, kutanga mangwanani, uye masikati uchienda kuMinneriya ku enda pane safari. Sigiriya inogona kusvika nechitima, mota kana bhazi kubva kuColombo (guta guru) kana kubva kuKandy (iro guta rechipiri pakukura uye riri pakati peSri Lanka).
Zvakanaka kwazvo kuona kuti zuva rinonyura rakakomberedzwa nenzou uye nzvimbo dzinoyevedza kubva mupaki yenyika iyi.
Imwe sarudzo iripo ndeyekuita chikamu chesafa yakakwira nzou. Mamwe eanoshanda anopa sevhisi iyi, vachifamba kuburikidza neMinneriya nenzou kuburikidza nemumasango nemasango. Ini pachangu, handizive kana zvakakodzera, ndakasarudza kuita rwendo rwese nemotokari.
Chii chekuona muMineriya? Fauna
Minneriya National Park inozivikanwa pasi rese nekuda kwenzou dzayo dzeAsia. Kune mazana avo musango uye zviri nyore kwazvo kuona akawanda acho masikati mamwe chete. Kugarisana pakati pevanhu nemhuka idzi zvakasikwa zvachose uye zvine ruremekedzo, vakajaira mota dzakawanda kuuya kuzodziona zuva rega rega. Zvakadaro pachezvangu ndinofunga kune mota dzakawandisa munzvimbo umo mune mhuka dzakawanda. Ini handizive kana hurumende ichimanikidza muganho wepamusoro wekupinda mupaki.
Munguva yezhizha (mwaka wakaoma munzvimbo iyi), nzou dzinouya ka1 kana ka2 pazuva kuzonwa mvura pagungwa guru, ndipo paunogona kuona nzou dziri padyo.
Kunze kwenzou, paki iyi izere netsoko, maruzevhi, maflamingo nemarudzi ese eshiri, mapikoko, nyati yemvura, ... Kunewo mbada, kunyangwe zvakaoma kuona.
Mune mahekita mashoma iwe unogona kuona marudzi ese emhuka.
Chii chekuona muMineriya? Flora
Minneriya National Park iri musango reSri Lanka.
Izvo zvinomera zvepaki zvine masango anodziya akaoma anogara akasvibira, akasanganiswa nehuswa, nzvimbo dze shrub nenzvimbo nyoro. Nzvimbo inotarisisa munzvimbo ino madhibhoni nema meadows.
Mimwe yemiti iripo muMinneriya ndeyenharaunda kuchitsuwa ichi, inogona kungoonekwa munyika ino. Semuenzaniso iyo Ceylon muchindwe. Iyo inodziya uye inonaya mamiriro ekunze inogadzira nzvimbo yeakasarudzika kunaka kwechisikigo.
Kubva pane zvakaitika kwandiri ndinogona kukuudza kuti safari muSri Lanka haina kufananidzwa neafari yeAfrica asi chiitiko chinokurudzirwa zvachose kana iwe ukaenda kuSoutheast Asia. Sezvandambotaura kare, zvichipiwa padyo nekwakatatu mutsika, ndinokurudzira kuti uende kuSigiriya mangwanani uye Minneriya masikati. Kupinda kwacho hakuna kudhura zvakanyanya asi mumaawa maviri kana matatu esafari unonakidzwa nenzvimbo uye mhuka dzepaki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Colombo » Minneriya, yakanakisa safari muSri Lanka
Idzo nzvimbo dzakachipa pasi rese dziri muAsia
Zvinhu zvekuona muMilan